Khilaafka doorashada:- Dowladda Jabuuti Oo ka Jawaabtay eedayntii Dowladda Soomaaliya | Gaaroodi News
Khilaafka doorashada:- Dowladda Jabuuti Oo ka Jawaabtay eedayntii Dowladda Soomaaliya
Wasiirka warfaafinta ee Jabuuti, Ridwaan Cabdullaahi Bahdoon
Khamiistii ayey aheyd markii dowladda Soomaaliya ay wadammada Kenya iyo Jabuuti ku eedaysay inay wadaan olole ka dhan ah oo ay sheegtay inay ka dhex wadaan Golaha Nabadda iyo Ammaanka ee Midowga Afrika. Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya, Cismaan Abuukar Dubbe
Dowladdu waxa ay waqtigaas sheegtay inay hayso xog xasaasi ah oo xaqiijinaysa in labadaas dal ay soo jeedinayaan qodobo ay doonayaan in lagu daro bayaanka uu guddigaas soo saari rabay maalintaas.
Wasiirka Warfaafinta ee Soomaaliya, Cismaan Abokor Dubbe, oo ka hadlayay taleefishinka qaranka ee dalka, ayaa waxa uu ka digay waxkasta oo taabanaya gobonnimada iyo madax bannaanida siyaasadeed ee Soomaaliya.
Dhanka kale, dowladda Jabuuti ayaa sheegtay inay ku mowqif tahay bayaankii uu soo saaray Golaha Nabadda iyo Ammaanka ee Midowga Afrika.
“Golaha Nabadda iyo Amniga ee Midowga Afrika iyo Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa mowqifka ay qaateen waxa uu ahaa in laga baaqsado waxkasta oo carqaladaynaya xasiloonnida Soomaaliya,” ayuu yiri wasiir Bahdoon.
Wasiirka warfaafhinta ee Jabuuti ayaa dhinacyada isku haya siyaasadda Soomaaliya waxa ay ugu baaqday in miiska wadahalka ay dib ugu laabtaan.
“Jabuuti waxa ay ugu baaqaysaa dhammaan dhinacyada Soomaaliya inay ka waantoobaan hadallada rabshadaha dhicin kara, oo ay la yimaadaan is-aqbalaad iyo dulqaad, isla markaana ay ku soo bandhigaan aragtidooda iyo waxyaabaha ay kala tabanayaan albaabka u furan oo ah dib u heshiisiin.”
Dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay soo dhaweynayso ergayga la filayo in Midowga Afrika u soo magacaabayo dhexdhaxaadinta dhinacyada Soomaaliya, balse waxay si adag u diiday qodobo kamid ahaa bayaankii Midowga Afrika ka soo saaray xaaladda cakiran ee khilaafka doorashada Soomaaliya oo ay kamid ahaayeen in ay diidan yihiin muddo kordhinta loo sameeyay hay’adaha dawladda Federaalka.
Markii uu bayaankaasi soo baxay kaddibna, wasiirka warfaafinta Soomaaliya, Cismaan Abokor Dubbe, oo Sabtidii shir jar’aaid ku qabtay magaalada Muqdisho, ayaa sheegay in aanu jirin ururo cambaareyn kara go’aan baarlamaan oo uu qaatay dal madax bannaan.
“Ma jiro urur caalami ah ama urur goballeed oo sharciyan cambaareyn kara go’aan baarlmaan dal madax bannaan arrintaas waxaan u sheegaynaa in aaney ahayn sharci dowladda federaalka Soomaaliyana ma soo dhaweynayso” ayuu yiri wasiir Dubbe.
Qoraalkii uu Midowga Afrika ka soo arrimaha Soomaaliya
Golaha nabadda iyo ammaanka Midowga Afrika ayaa kulan ay ka yeesheen arrimaha Soomaaliya waxaa ay ka soo saareen war-murtiyeed ay ku qeexayaan mowqifkooda doorashada Soomaliya.
“Waxaan walaac qoto dheer ka qabnaa tallaabadii halka dhinac ahayd ee Golaha Shacabka Soomaaliya uu ku dhaqaaqay 12kii Abriil 2021, kaasoo meesha ka saaraysa heshiiskii 17-kii Sebtember 2020 ee qaababka loo marayo qabashada doorashooyinka Soomaaliya”ayaa lagu yiri bayaanka.
Ergayga ayay golahu waxay ku booriyeen in muudo 4 toddobaad gudahood ah uu ugu soo gudbiyo guulaha laga gaaro qabashada doorashooyiinka Soomaaliya.
“Sidaas awgeed waxaan ka codsanaynaa Guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika inuu si deg deg ah ugu magacaabo una diro Soomaaliya, ergay gaar ah, si uu ula shaqeeyo dhinacyada iyo daneeyayaasha kale ee ay khuseyso, si loo gaaro heshiis wadar-oggol ah, iyo in muddo 4 toodobaad ah uu warbixin ugu soo gudbiyo golaha”ayaa lagu yiri warmurtiyeedka
Gudoomiyaha Midowga Afrika ayaa dhanka kale golahu, waxay ka codsadeen, inuu si deg deg ah u isugu yeero shir loo qabanayo wadamada ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya si looga baaraandago saameynta amni ee ay keeni karto ismari-waaga siyaasadeed loogana tashado waddooyinka u furan ee lagu xalin karo ama hoos loogu dhigi karo